China Aluminium camera Ikhoyili mveliso kunye nabathengisi | Alucosun
I-aluminium yangaphambi kokupeyinta ibonelela ngomgangatho ophezulu kakhulu opeyintiweyo kuluhlu olubanzi lwemibala kunye noburhabaxa. Ikwafumaneka nakwiifilimu eziprintiweyo ukunika iziphumo ezinjengokhuni lwenkuni kunye nemabhile.
Umbala unokuba matt kakhulu okanye ubengezele kakhulu, ubushelelezi, ujonge anti-krweba. Ikwafumaneka kumanqanaba ahlukeneyo e-aluminium kunye neealloys ukuze ulungelelanise ukubanakho kunye namandla. Alucosun inikezela ngekhoyili edibeneyo ephezulu e-PE, i-HDPE, i-PVDF, uhlobo lwe-NANO-PVDF kwisicelo sakho esininzi.
I-PVDF kunye neFEVE
Iphaneli ye-Allucosun aluminium edityanisiweyo yamkela kuphela iPVDF KYNAR 500 okanye ipeyinti ye-FEVE eyaziwa ngokuzinza kwayo. Ezona zinto zibalaseleyo zeekhemikhali kunye nezinto ezibonakalayo zale peyinti esemgangathweni ziye zaqatshelwa kwaye zabonakaliswa ngabasebenzisi behlabathi kunye nabayili bezakhiwo kule minyaka ilishumi idlulileyo kwaye ngoku oku kusaqhubeka mihla le.
I-Alucosun inebala elingenamda kunye nokhetho lokugqibela olwenziwayo, ukuhlangabezana nabayili kunye nobuchule obungenakubumba bokwakha.
Iphaneli edityanisiweyo yealuminium Alucosun NANO-PVDF yambathiswe ngophahla lwepeyinti yeNano-PVDF, yongeza umaleko wokuboniswa okungabonakali kongcoliseko lwe-NANO ngaphezulu kwengubo ye-PVDF kulusu lwe-aluminium engaphambili. Ngaphandle kwazo zonke izibonelelo ezimangalisayo zokwaleka kwe-PVDF, i-NANO-PVDF igqwesile ekungqineni ungcoliseko, ubungqina bemichiza kunye nokuzicoca
Njengoko imicroscope ibonisa, umphezulu wePVDF unamaqhuqhuva ngelixa enye ye-NANO-PVDF igudile. Ndiyabulela kule nto, ukuntywila kunye neoyile akunakugqobhoza kumphezulu kwaye ithontsi lemvula linokubasusa ngokulula, kunciphise kakhulu iindleko zokugcina.
Umthi we-Alucosun kunye ne-marble series zidibanisa ubuhle bendalo bamthi kunye nelitye kunye neepropathi ezibalaseleyo zepaneli ye-Alucosun aluminium edityanisiweyo, izisa ukubonakala okutsha kwezakhiwo. Olunye uncedo olubaluleke ngaphezu komthi kunye nelitye lokwenyani kukuba loo nto inokubunjwa kuyo nayiphi na into eceliweyo.
Iindidi ezimbini ziyafumaneka ngomgangatho wokugqitywa kwepeyinti ye-Kynar Oku kuzinzile ngokwaneleyo ukuba kusetyenziswe ixesha elide langaphandle ngelixa ifilimu ye-PET esetyenzisiweyo intle kodwa iyabiza iindleko zokuhombisa ngaphakathi.
IBrashi kunye nesipili
I-Alucosun ibrashi kunye nesipili sesothotho siyakuvumela ukuba wamkele isibheno sobuhle ngomgangatho okhuselekileyo we-lacquer, okwangoku, ikunika ukusebenza okuphezulu kwephaneli ye-Alucosun aluminium edityanisiweyo njengokuqina okungaqhelekanga kunye nokumelana nemozulu. Ngokweenkcukacha, uthotho lwebrashi lukwenza ubone ialuminiyam eluhlaza nakwisipili sayo sikunika umfanekiso ofanayo njengesipili seglasi esinoxinzelelo kuxinzelelo.
Enkosi kwisiphumo esahlukileyo, ezi zimbini zigqityiweyo zithandwa kakhulu kumhombiso ongaphakathi weklasikhi kunye nemiboniso. Ngaphandle koko, i-Alucosun ikwanenkangeleko ye-anodized kwezi zimbini zigqibeleleyo zinikezela ngeengcinga zoyilo lwangaphandle kuyilo lwangaphandle ezinewaranti yexesha elide.
Solid, isinyithi, Ngokhuni, isipili, i-Anodized, ibrashi
PE, iHDPE, iPVDF, FEVE, NANO-PVDF, YENZISWA
Zophahla, nophahla, Door, Ukwenza ACP, umjelo, rhanga-zophahla
kwiintsuku ezingama-15-25 zixhomekeke kubungakanani beekhoyili
I-L / C engenakuguqulwa emva kokubona, okanye i-T / T.
Egqithileyo IPHANELELA YENDLELA YENTSIMBI
Okulandelayo: Iphaneli yeAluminiyam edityanisiweyo
I-coil coil edibeneyo
Umbala oMnyama weAluminiyam